China Carton mbiri yekona diagonal sealing labeling muchina Kugadzira uye Fekitori |S-conning
Carton mbiri yekona diagonal yekuisa chisimbiso muchina
APPLICATION:Yakasiyana-siyana square mabhokisi, kunyora kune imwe chete uye mbiri pamakona & kuisa chisimbiso
•Bata pasi conveyor nekumhanya kwakabatana kuchengetedza kugadzikana kwemakatoni kana uchinyora.Inova nechokwadi chekuisa mareebhu kunoenderana nemakatoni ehuremu.
•Kupa mabhokisi ekuparadzanisa, kudzvanywa kwepamusoro uye kugadzirisa, kunyora, kona inobata label uye leakage label yekuona label & yekuramba label uye mamwe mabasa, kuve nechokwadi chekuisa chisimbiso uye kunyora zvine hungwaru, kuitira kuti vashandisi vagone kuvimbiswa kubatana nemuchina wekatoni, kuti vaone kukurumidza-kumhanya. operation;
•Optional transparent ecloser yekudzivirira, ine security lock switch, kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwemushandisi.
-Kutora yakakwirira-kumhanya servo labeling system.
-Inoshanda kune akasiyana marudzi emakatoni ekunyora, ane divi-rimwe kana diagonal chisimbiso uye kupeta kwekona.
- Yakagadzikana kumhanya: 0-200 pcs / miniti.
-Yakakwirira-chaiyo yekunyora sisitimu, ine kushivirira kwemavara ± 1mm.
-Yakangwara yekudzora sisitimu yekuona kuti hapana makwinya kana uchinyora uye hapana mabhuru emhepo emapepa akajeka.
-Kugadziridza nzira yesynchronous chain kuti ive nechokwadi chakagadzikana kuendesa katoni uye chaiyo chinzvimbo.
Bhokisi Labeling Machine inonzwisisika uye inochinjika dhizaini yakanakira akasiyana zvigadzirwa kunyora.
Inogona kudhinda zvinyorwa zvechinhu chakasiyana, wedzera huwandu hwemashandisirwo.
Nekuwedzera iyo yekuwedzera label vanyoreri vanogona kuona chimuti chakapetwa kaviri uye kudzokorora runyoro rwetsvimbo, Tinogona kuwedzera akasiyana ezvikamu zvekuonekwa pamhepo uye kuramba basa zvinoenderana nezvaunoda.
Dynamic clamping belt .ve nechokwadi chekuiswa kwemavara nemazvo.
•Smart label kureba yakasetwa kuti ikurumidze kuwana chinzvimbo chakakwana chezita nekaunda.
•Kushaikwa label set inodzivirira chigadzirwa kupotsa-chakanyorwa kuti ive nechokwadi chechokwadi chechigadzirwa panguva yekugadzira uye kuzadzisa kugadzirwa kweQC maitiro.
•Kaunda-yakavakirwa-mukati inogona kumhanya yakasununguka ichichengeta nhamba yezvigadzirwa zvakanyorwa kudzora kugadzirwa.
•Kugadzira preset basa iro labeler rinomira otomatiki kana nhamba yaidiwa yezvigadzirwa yakanyorwa kuti ishande manejimendi ekugadzira.
Zvakapfuura: Kaviri Side Flat Square Round Bottle Labeling Machine
Zvinotevera: liquid bhodhoro kurongedza muchina
Commercial Bottle Labeling Machine, Sticker Labeling Machine Manufacture, Printer For Cosmetics Jars Bottles, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Syringe Assembly uye Labeling System, Plastiki Chisimbiso Machine,